Manchester United oo badelka Lukaku kala soo wareegeysa horyaalka Premier League – Gool FM
Manchester United oo badelka Lukaku kala soo wareegeysa horyaalka Premier League
(Manchester) 23 Agoosto 2019. Xiddig hore ee kooxda Tottenham ayaa ku dhow inuu u dhaqaaqo naadiga Manchester United, sida maanta oo Jimco ah lagu sheegay wargeysyada ka soo baxa dalka England.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England kooxda Red Devils ayaa u dhow iny lasoo wareegto saxiixa weeraryahanka reer Spain ee Fernando Llorente.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Fernando Llorente uu ogolaaday inuu ugu dhaqaaqo garoonka “Old Trafford” heshiis labo xili ciyaareed ah.
United-ka ayaa xiiseeneysa inay lasoo wareegto wareeryahan cusub, si ay kaga dhigato badalka Romelu Lukaku oo kaga dhaqaaqay kooxda Inter Milan, xili sidoo kale la filayo in Alexis Sanchez uu u wareego garoonka San Siro.
Heshiiska Fernando Llorente ee kooxda Tottenham ayaa dhacay xagaagan, sidaas darteed xiddiga reer Spain ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu la saxiixdo koox kasta si bilaash ah, xitaa kaddib markii albaabada loo laabay suuqa xagaaga ee dalka England.
34 jirka reer Spain ayaa 66 kulan uu u saftay kooxdaTottenham wuxuuna u dhaliyay 13 gool.